२२ वर्षीया सहचालक भन्छिन्ः अब ढोका होइन, स्टेयरिङ सम्हाल्ने हो – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/२२ वर्षीया सहचालक भन्छिन्ः अब ढोका होइन, स्टेयरिङ सम्हाल्ने हो
‘पढ्ने छाँट देखिएन, अब खलासी हुन पनि नसुहाउने भइस्।’
पढाइमा कमजोर छोराछोरीलाई धेरै आमाबाबु यसै भन्दै गाली गर्छन्।
सहचालक भनेर ‘खलासी’लाई न्याय गर्न खोजिए पनि यो पेसा उपेक्षामा परेकै छ। गाडीका ढोका ढक्ढक्याउँदै गन्तव्य फलाकिरहने सहचालकबारे यात्रुका मनमा गाढा बिम्ब छन्– मैलो, धुस्रे-फुस्रे, रातो-खैरो कपाल, कानमा टप लगाउने, झर्केर बोल्ने।
त्यसैले होला, सकेसम्म यो पेसामा छोराछोरी जोडिन नपुगून् भन्ने कामना गरिन्छ।
त्यसो त यो पेसामा पुरुषकै ‘सिन्डिकेट’ छ। किशोरीहरू यो बाटोमा सितिमिति आइपुग्दैनन्। काभ्रे, पनौतिकी उषा सापकोटा भने पेसा र समाजकै ‘सिन्डिकेट’ तोड्न लागिपरेकी छन्।
अरूभन्दा भिन्नै बाटो हिँड्न मन गर्ने र सबै कामलाई इज्जतले हेर्ने उषा साझा बसकी कान्छी सहचालक हुन्। यात्रुलाई गन्तव्यमा ओराल्दै उनी आफ्नै गन्तव्य तय गरिरहेकी छन्।
‘म यहाँ आउँदा २१ वर्षकी थिएँ,’ उषा साझा आउँदाको दिन सम्झिन्छिन्, ‘कम बोल्थेँ, सबैले मलाई नै हेरिरहेजस्तो लाग्थ्यो।’
समय चलिरहँदा धेरैथोक रोकिएको छ। कोरोनाकै कारण सडकदेखि महलमा बस्नेसम्मले रोजीरोटी गुमाएका छन्। उषालाई भने रोजेरै आएको पेसा उम्काउने मन छैन। त्यसैले त कोरोना कहरमा पनि संघर्ष गरिरहेकी छन्। स्यानिटाइजर र मास्कको सहारामा उनी सफलतामा इँट्टा थप्न चाहन्छिन्।
लकडाउनअघि लगनखेल–नयाँ बसपार्क रूटमा मैले उनलाई बारम्बार देखेकी थिएँ। कति दिन उनकै बस चढेर फरक-फरक गन्तव्यमा झरेकी थिएँ। विनम्र भावमा सबैलाई मिलेर बस्न लगाउने उनको व्यवस्थापकीय क्षमता गजबकै लाग्थ्यो। एक-दुई दिन भेटिने यात्रुसँग मिठो बोल्नुपर्ने मान्यता राख्छिन् उनी।
‘नियमित यात्रुलाई केही भन्नै पर्दैन। स्टेसन र भीड बुझेर आफैं मिल्छन्। नबुझ्ने भनेको कहिलेकाहीँ चढ्नेहरू हुन्। कहिलेकाहीँ भेटिनेसँग नमिठो बोलेर किन नराम्रो हुनू? उल्टै साझाको बेइज्जत्,’ काम र आफूआबद्ध संस्थाप्रति इमानदार सुनिन्छिन् उनी।
सहचालक भइरहँदाको रोचक अनुभव, लकडाउनले सिर्जना गरेको कष्टकर जीवनशैली, सरोकारवाला निकायलाई सुनाउन मन लागेका उनीसँग थुप्रै विषय होलान् भन्ने लागेको थियो। बस यात्रा गर्दै उनीसँग कुराकानी गर्ने योजना थियो। दुर्भाग्य, त्यही दिन गाडी बिग्रिएर ग्यारेजमा थन्कियो।
बिहीबारबाट निषेधाज्ञा सुरू हुनुअघि महामारीको त्रासमा सडकमा निस्केकी उनी के सोच्दी हुन्?
उनी सहचालक, म यात्रुका रूपमा बसमा गुडेका बेला मनमा अनेक प्रश्न खडा भएका थिए- यतिका भिडमा सहचालक हुने आँट उनमा कसले भरिदियो होला? बाध्यताले डोरिएको पो हो कि? रहरै होला त?
लजालु स्वभावकी उषा खुलेरै बोल्न थालिन्। सोचेभन्दा नितान्त भिन्न रहेछ उनको कथा। एउटी युवतीको मनभित्र साझाको सहचालक हुँदै चालक बन्ने सपना हुर्किइरहेको छ भन्दा सुरूमा पत्याउनै सकिनँ।
भारतमा बुवाको काम चलिरहँदा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नभएको उषा बताउँछिन्।
‘लकडाउनले अहिलेसम्म अप्ठ्यारो पारेको छैन। पनौतिमा भुइँचालोले भत्काएको घर बनाएर आएका छौं,’ उनी लकडाउनको उपलब्धि सुनाउँछिन्, ‘धान पनि रोपेर आएका छौं। यता आपत् पर्‍यो भने उतै लाग्ने हो।’
सर्सर्ती हेर्दा लकडाउनले उनलाई त्यति साह्रो अप्ठ्यारो पारेन। कहिलेकाहीँ केही भएको छैन भन्दा पनि धेरै थोक भइरहेको हुन्छ, जुन हामीले महशुस गर्न भ्याउँदैनौं। उषाको हकमा पनि यस्तै भयो।
कामको चक्करमा दुई वर्ष पछि धकेलिएको पढाइ पनि उनले अघि बढाउने सुरसार गरेकी थिइन्। कोरोनाले पछि सार्ने निश्चित छ।
उनको परिवार भुइँचालोयता लुभु बस्दै आएको छ। बिहान ७ बजे उनी साझा यातायात केन्द्रीय कार्यालय आइपुग्छिन्। दिनभरको हिसाब-किताब मिलाएर घर पुग्दा राति ८ बज्छ।
‘लगनखेल–बसपार्क, लगनखेल–बुढानिलकण्ठ रूट सजिलो लाग्छ। इन्चार्जले त्यहीँ खटाउनु हुन्छ। त्यहाँ चढ्ने यात्रु पनि नियमित छन्,’ उनी दैनिकी सुनाउँछिन्, ‘पोहोर यतिबेला घर पुग्दा राति १० बज्थ्यो। अहिले सजिलै भएको छ।’
घरकी जेठी छोरी उषालाई रोजेर, पर्खेर काम गर्ने सुविधा थिएन। जे जस्तो आइपर्छ, सुरू गरेकी हुन्। सुरक्षा गार्ड, आयल निगममा जागिर, मन्टेश्वरीमा शिक्षक आदि काम राम्रै भएर पनि ३-४ महिनाभन्दा रमाउन सकिनन्।
उषाले साझाको ढोका सम्हाल्न थालेको डेढ वर्ष भयो। २१ वर्ष उमेरदेखि साझामा आएकी उनी ढोका र टिकट मात्रै होइन, छिट्टै स्टेयरिङ सम्हाल्ने योजनामा छिन्।
यसअघि उनले हाँपदाँप नगरी तलब पाइने सुरक्षा गार्डको काम पाएकी थिइन्। कमाइ राम्रै थियो। सधैं एकै ठाउँ बस्नुपर्ने कामले उनलाई त्यति आकर्षित गरेन। त्यति नै बेला चिनजानकै एक जना दाइले साझामा सहचालक माग भएको जानकारी दिए।
व्यवस्थापन संकायमा प्लस-टु सकेकी उनलाई ‘पढेर पनि के यस्तो काम गरेको’ भन्ने थुप्रै छन्। खासगरी उनकै उमेरका साथीहरू, जो बिनाकाम दिन बिताइरहेका छन्।
भर्खर भर्खर सहचालकको काम सम्हालेकी थिइन् उषाले। सँगै कलेज पढेकी साथीले एकदिन काम खोजिदिन भनिन्। उषाले साझामै आउन प्रस्ताव गरिन्। त्यसपछि साथीले दिएको जवाफले उनलाई अहिले पनि दु:खी बनाउँछ।
उनी थप्छिन्, ‘लाज हुने भए त कोही पनि सहचालक नहुनुपर्ने हैन र!’
बिहे भएको केहि महिनामै स्वेता खड्काले पाइन् धोका ! सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै गरिन् यस्तो सहयोगको अपिल